Global Voices teny Malagasy » Sri Lanka: Fipoahana baomba sy fitohizan’ady · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Oktobra 2018 0:35 GMT 1	 · Mpanoratra Nishadha Silva Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsimo, Sri Lanka, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Maty novonoin'ny LTTE ny parlemantera ambony iray sady iray amin'ireo minisitra manan-danja indrindra tao amin'ity governemanta ankehitriny. Heverina fa nanafin-tava ho toy ny mpihazakazaka amin'ny Marathon ilay mpidaroka baomba. Manome vaovao farany fohy momba ny tranga ny DefenseNet  saingy niteraka adihevitra mafana ilay lahatsoratra ary araka ny hevitro, dia manome topi-maso momba ny ao an-tsain'ireo Sri Lankey amin'ny ankapobeny, izay zatra mahita olona matin'ny fipoahana baomba. Ireto ambany ireto ny sasantsasany tamin'ireo fanehoan-kevitra, vakio ny lahatsoratra feno momba ny famonoana ilay minisitra Jeyeraj Fernandopulle tamin'ny Baomba tao Weliweriya .
Ankoatra ilay minisitra, olona teo amin'ny 10 koa no namoy ny ainy ary anisan'izy ireo ilay tompon-daka nasionalin'ny marathon Atoa Karunasena malaza sy “Marathon Karu” ary ny Mpanazatra ny Atletika Nasionaly Atoa Lackshman De Alwis. About Sri Lanka  miresaka momba ireo olona malaza hafa naratra ao anatin'ity lahatsoratra ity .
ground views  kosa miresaka momba ny IDP (olona nafindra toerana ao anatiny) adino avy any avaratra izay nanamarihany ny fijalian'ny Silamo sy ny hafa ao amin'io faritra io nandritra ny roapolo taona mahery.
Na dia tsy mampalahelo tahaka ny hitan'ny ground views aza, niresaka ihany koa ny transcurrent.com  momba ny zava-tsarotra atrehin'ny IDP, indrindra mikasika ny olana ara-piarovana atrehin'izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/01/126804/
 famonoana ilay minisitra Jeyeraj Fernandopulle tamin'ny Baomba tao Weliweriya: http://defencenet.blogspot.com/2008/04/minister-jeyeraj-fernandopulle-killed.html
 About Sri Lanka: http://aboutsrilanka.blogspot.com
 ao anatin'ity lahatsoratra ity: http://aboutsrilanka.blogspot.com/2008/04/sri-lankan-mp-jeyaraj-fernandopulle.html
 ground views: http://www.groundviews.org/
 zava-tsarotra atrehin'ny IDP, : http://transcurrents.com/tamiliana/archives/471